Ukukhanya kwe-Chinese inground, underwarter kanye ne-architecture i-LED lighting lights - u-Eurborn
Indawo elula PL021
Indawo ekhanyayo PL023
Indawo ekhanyayo PL026
Indawo elula PL608
Ividiyo Yokufakwa Ku-Ground LED Light
Ikhwalithi ephezulu nezinga eliphakeme.
U-Eurborn ukuphela komkhiqizi waseChina ozinikele ocwaningweni, ekuthuthukisweni nasekukhiqizweni kwensimbi engagqwali ongaphandle komhlaba nokukhanyisa ngaphansi kwamanzi. Ngokungafani nabanye abahlinzeki abenza izinhlobo eziningi zezibani, kufanele sihlale sigxile ngenxa yendawo enzima ebekela inselelo umkhiqizo wethu. Umkhiqizo wethu kufanele ukwazi ukuthatha lezi zimo futhi usebenze kahle ngaphandle kwenselelo. Ngakho-ke kufanele senze yonke imizamo ezinyathelweni ezithile ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wethu uzokwenza ukwaneliseka
Ukukhanya kwesiteji ngogqinsi olungu-12mm kuphela -GL108
Ngezinqubo zokuphatha ezisezingeni eliphakeme nezesayensi, ikhwalithi enhle kakhulu nezinkolelo ezinhle kakhulu, sizuze idumela elihle. Ngasikhathi sinye, u-Eurborn ugcizelela emisha eqhubekayo, futhi wethula lokhu kukhanya okuvela ku-lam yamanje ye-thinnest lam ...
Izinhlobo ze-4 zezibani ze-Stair
1. Uma kungengenxa yobumnandi, isigxobo sokukhanya asinambitheki Ngempela Uma sikhuluma iqiniso, isibani sezitebhisi cishe siyefana nesibani sendlela. Kuyisibani sokuqala emlandweni ukuthi sisetshenziswe njengedizayini yokucabanga, ngoba izitebhisi ebusuku kufanele zibe nezibani, o ...